Shiinaha Duulaysa 3D Dabeecad Dheeraad ah Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Biyo-xidheenka WPC Decking | Lihua
3D Kordhinta Dabeecado Dheeraad ah oo Biyo Hollow WPC Decking ah
Lahaanshaha alaabooyinka:3D WPC Decking
Qiimo:$ 2.45 / M
Midabka:Gray, Teak, Dhuxul, Shukulaato, bunni, iwm
Waqtiga Lead:8-16 MAALMO
3D Lagu Duubay WPC Decking
2.4m, 3.6m, ama loo habeeyay
Barxadda, Beerta, Beerta
Burush iyo sanding
Tiknoolajiyada cusub ee 3D embossing WPC dabaqa qurxinta banaanka, hagaajinta qurxinta. Tiknoolajiyada wax lagu duubo ee 3D waa farsamo xardho oo dusha sare ah. Dabaq kasta wuxuu la mid yahay farshaxan, jawiga farshaxanka iyo shahaadada muuqaalka ayaa si weyn loo hagaajiyay. Kordhinta 3D-ga 'Classical 3D' waa horumarin weyn oo lagu arkay dabaqyada alwaax-caag ah, oo kaliya laguma xardhi karo baandooyinka laakiin sidoo kale waxay taageeri karaan astaamaha bilowga ciyey.
2. Dhaqan wpc decking iskudhafan way fududahay in lumiyo hadhuudhka dusha sare, qurxinta super embossed waxay sifiican uga shaqaysaa wax kasta oo alwaax isku dhafan ah, waa mid dabiici ah oo soo jiidasho leh, sifiicnaan u sii yaraanta iyo xoqida oo adkaysi u leh.
3.Lihua's super embossed Qurxinta WPC waxay leeyihiin dhammaan faa'iidooyinka dhaqanka decking isku dhafan , weli waa la hayaa: biyuhu, UV-diidka, u adkaysiga cimilada, ladagaalanka sunta, kahortaga cayayaanka, dayactirka hooseeya, adeega muddada dheer iwm. dusha sare.
Awoodda Laabista: 27.4 MPa Modulus of elasiticity: 3969 MPa Xamuulka ugu badan: Micnaha 3786N, Min 3540N Leexashada 500N: Micnaheedu: 0.86mm, Max: 0.99mm
EN 15534-1: 2014 Qaybta7.4.1 EN 15534-4: 2014 Qaybta 4.5.3
Taako lagu yaqaan isticmaalka: Micnaha MeanS≤10mm, Max ∆S≤13mm, Micnaha ∆Sr≤5mm
Barar Baaxad leh: ≤4% dhumucdiisuna, ≤0.8%
Barar Baaxad leh: 1.81% dhumuc ahaan, 0.22% ballac ahaan, 0.36% dherer Max Barar: 2.36% dhumuc ahaan, 0.23% oo ballac ah, 0.44% dherer ahaan dhuuqmada Biyaha: Micnaheedu: 4.32%, Max: 5.06%
Adkaanshaha Brinell: 79 MPa Heerka soo kabashada laastikada: 65%
Hore: 3D Soodhawaynta Cimilada Cimilada Iskudhiska Hollow WPC Decking
Xiga: Ka Hortagga Cayayaanka Caaga WC Decking ee caag ah oo dib loo isticmaali karo
Iyada oo la rakibo oo si habboon loo daryeelo, alaabada alwaaxda ayaa loo dammaanad qaaday inay bixiyaan sannado ku raaxeysiga dibadda. Si loo gaaro rakibaadda dhib-la'aanta ah ee alaabada alwaax:
-Ka tasho xeerarka dhismaha ee maxaliga ah kahor rakibida.
- Markaad siddo looxyo, ku qaado dhinaca si aad u hesho taageero ka sii fiican.
-Xusuusin tilmaamaha rakibida ee tilmaamaha dheeraadka ah ee shey kasta.
Si loo yareeyo xagashada, nikyada, googoynta iyo jeexjeexyada, loona ilaaliyo quruxda qoryaha. Raac tilmaamahan:
-Ha is dul-qaadin sagxad is-dul dhig ah marka aad guureyso. Markii aad ka saareyso cutubka, kor u qaad buundooyinka oo hoos dhig.
-Ha yeelin qalab ama ha u jiidin qalabka dusha sare dusha sare inta lagu gudajiro dhismaha.
- Ka ilaali dusha sare dusha ka nadiifinta qashinka dhismaha. Raadinta wasakhda iyo qashinka dhismaha guud ahaan dusha sare, taas oo gacan ka geysaneysa xoqitaanka dusha sare.
Dhammaan alaabooyinka alwaaxda, qalabka alwaaxda lagu shaqeeyo ayaa loo isticmaali karaa, sida ku cad tilmaamaha soo-saaraha.
-wuxuu leeyahay caabbinta warqadda sifiican oo qoyan ama qalalan.
-wood wuxuu leeyahay nidaam xiraha qarsoon ee qarsoon waana fududahay in lagu rakibo boodhadhka alwaaxa.
-U isticmaal ugu yaraan # 8 x 2-1 / 2 ”tayo sare leh oo dahaadhan, bir bir ah ama shaashad isku dhafan oo isku dhafan.
- Ha u isticmaalin xabagta ama xarkaha dhajiska alwaaxda ama ku xir xirmooyinka u dhexeeya labada deked iyo wixii kale. Tani waxay hor istaagi doontaa ballaarinta dabiiciga ah iyo foosha looxyada waxayna xannibi doontaa dheecaanka qashinka.
-Barnaamijyada xaddidan qaarkood, oo ay ku jiraan dabaqyada laga dhisay meel gees ah, hawo dheeri ah ayaa loo baahan doonaa halka sagxadda ay ku kulmaan dhismaha. Ka gaabinta bixinta hawo ku filan waxay sababi kartaa fashil ku yimaada sagxadda dusha sare waxayna baabi'in doontaa dammaanadda.
Tilmaamaha Rakibaadda Decking Lisen Wood
Waad badbaadin kartaa waqtiga dhismaha iyo kharashyada adoo sameysanaya naqshad, qorsheynaya inaad miisaaniyad ugu yeelatid alaabada lagama maarmaanka ah iyadoo loo eegayo ujeeddada barnaamijka. Waxaad ku dooran kartaa maadadaada sida aad rabto iyada oo leh noocyo badan oo ikhtiyaari ah, dhismaha alwaax, mashiinada alwaaxa loo isticmaali karo jarista, jarista, qodista iyo wixii la mid ah.
Markaad rakibayso decking, marka hore waa inaad sameysid daaweyn qallafsan oo dhulka ah, ka dibna ku hagaaji jaranjarada dhulka adag. Waxaan kugula talineynaa joornaalka 35-40cm. Kala dheereynta Joist sidoo kale waa la gaabin karaa sida la codsaday.
Qalabka wadajirka ah ee alwaaxda lagu xirayo ayaa ah birta birta ah ee birta ka sameysan. Qoditaanku waa inuu ka yaraadaa dhexroorka dhexroor fur ee 3/4 si loo kordhiyo is-qabashada boorarka lagu qabto ciddiyaha.
Dhererka biraha birta ah ayaa la saameyn doonaa sababtoo ah aagga dhismaha oo weyn. Waxaan kugula talineynaa qeybta 5mm kala-goynta markii loo baahdo qaybta is-dhaafsiga.
1.Waad ku xidhi kartaa jeexitaanka iyo joornaalka boolal is-taabasho ah haddii clips-yada aan laga helin isku xidhka qafiska iyo gogosha.
Markaad rakibayso decking, marka hore waa inaad sameysid daaweyn qallafsan oo dhulka ah, ka dibna ku hagaaji jaranjarada dhulka adag. Waxaan kugula talineynaa joornaalka 35-40 cm. Kala dheereynta Joist sidoo kale waa la gaabin karaa sida la codsaday.
Tixgeli 3cm farqiga udhaxeeya dhismaha markaad rakibineyso dharka.
Qalab kale oo isku dhafan oo ah alwaaxda qoryaha waa boolisyo bir bir ah ka sameysan. Qoditaanku waa inuu ka yaraadaa dhexroorka dhexroor fur ee 3/4 si loo kordhiyo is-qabashada boorarka lagu qabto ciddiyaha.
Waad isku xidhi kartaa jeexitaanka iyo joornaalka iyada oo boolal is-taabasho ah haddii iskuulku aanu diyaar u ahayn isku xidhka xargaha iyo gogosha.
Tixgeli 3cm inta udhaxeysa dhismaha markaad rakibineyso decking adag Ku rakib jajab adag oo leh ciddiyo muuqda oo ciddiyaha dhig 2cm cirifka.
S: Mudo intee le'eg ayaad cusbooneysiineysaa alaabadaada?
A: Waxaan cusbooneysiin doonnaa badeecadeena bil kasta.
S: Waa maxay mabda'a naqshadeynta muuqaalka sheygaaga? Waa maxay faa'iidooyinka?
J: Wax soo saarkyagu waa nashqadeyn ku dhaqanka nolosha, sida ka-hortagga is-daba-marinta, u adkaysiga cimilada, lidka-luminta, iwm.
S: Maxay ku kala duwan yihiin badeecadaadu facooda?
J: Waxsoosaarkayaga WPC wuxuu adeegsanayaa wax kafiican oo cusub, markaa tayada ayaa kafiican ugana faa iidaysanaysa tikniyoolajiyadda, qiimaheena ayaa aad ufiican.
S: Waa kuwee shaqaalahaaga R & D? Waa maxay aqoontu?
J: Waxaan leenahay koox R&D ah, dhammaantood waxay leeyihiin khibrad buuxda celcelis ahaan, waxay ka shaqeynayeen aaggan in ka badan toban sano!
S: Waa maxay sheygaaga fikradda R & D?
J: Fikraddeenna R & D waa mid ku habboon deegaanka, dayactir hooseeya, adeegsi cimri dheer iyo tayo sare leh.
S: Maxay yihiin tilmaamaha farsamo ee alaabtaadu? Hadday haa tahay, maxay yihiin kuwa gaarka ah?
J: Qeexitaankeena farsamo waa cabir sax ah, hanti farsamo, waxqabadka Anti-siibte, Waxqabadka biyuhu, Awooda cimilada, iwm.
S: Shahaado noocee ah ayaad ka gudubtay?
J: Wax soo saarka Lihua waxaa tijaabiyey SGS oo leh heerka kormeerka tayada EU WPC ee EN 15534-2004, Heerka qiimeynta dabka ee EU oo leh darajada qiimeynta dabka B, American WPC heerka ASTM.
J: waxaa naloo xaqiijiyay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee ISO90010-2008, ISO 14001: 2004 nidaamka maaraynta deegaanka, FSC iyo PEFC.
S: Macaamiilkee ayaad ku dhaaftay kormeerka warshadda?
J: Qaar ka mid ah macaamiisha ka socda GB, Saudi Arab, Australia, Canada, iwm ayaa soo booqday warshaddeena, dhammaantood waxay ku qanacsan yihiin tayadeena iyo adeeggayaga.
S: Muxuu yahay nidaamka wax iibsigaagu?
A: 1 dooro maaddada saxda ah ee aan u baahanahay, hubi in tayada maaddada ay wanaagsan tahay iyo in kale
2 hubi in maaddada ay ku habboon tahay nidaamkayagu u baahan yahay iyo caddaynta
3 sameynta tijaabada maaddada, haddii la maro, markaa amar ayaa la siinayaa.
3D Lagu Sharaxay Decking
3D lagu xardhay Gogosha Decking
Duubay WPC decking
Super Embosed Hollow decking
Qurxinta biyaha ee WPC
3D Soodhawaynta Cimilada Cimilada Iskujira Hollo ...
3D Deep Embossed biyuhu isku darka WPC Hollo ...
Bannaanka Qoto Dheer oo Lagu Duulay Qoryaha Iskudhiska adag
Bannaanka Wood Midho Deep Embossed biyuhu WPC ...
UV Resistance Deep dhoobo adag WPC Decking E ...
Qurxinta WPC, alwaax decking isku dhafan, Bannaanka WPC decking, Qurxinta banaanka ee WPC, Dabaqa WPC, Gogosha WPC,